Nnu Nwere Ike Sweettọ Mori Space, Natural Cozy Bourgeoisie Ọnọdụ | BRJ .BỌR.
Home / Imepụta ime ụlọ / Nnu Nwere Ike Sweettọ Mori Space, Natural Cozy Bourgeoisie Ọnọdụ | BRJ .BỌR.
2020 / 10 / 17 nhazi ọkwaImepụta ime ụlọ 1589 0
Anyị nwere kọfị ma kpaa nkata
Nkwurịta okwu na-eme ka anyị nọrọ ibe anyị nso
Bọchị izu ụka dị ogologo ma na-atọ ụtọ
Bọchị mara mma ga-ekwughachi
N'oge ọgba aghara, ndụ na-eji nke nta nke nta alọta, ndị mmadụ na-amalitekwa ịtụgharị uche ma na-enyocha ndụ ha n'ọdịnihu.
N'oge ọrịa ahụ, ndị mmadụ nwere obi erughị ala ma na-echegbu onwe ha site na otu echiche nke ibi na oke ohere maka ogologo oge. N'ihi ya, ENJOYDESIGN nyochara ọtụtụ usoro maka ọdịnihu, na-enwe olileanya ịmepụta ebe obibi mara mma nke ga-eweta izu ike, nnwere onwe na olileanya n'ọdịnihu, ma gosipụta ọchịchọ maka ibi ndụ n'ọdịnihu.
Flowlọ ifuru, kọfị, ọmarịcha, akwụkwọ, akara ngosi nke udo na nkasi obi a gbanwere ka ha nwee ike ịghọta ebe a, na-ejikọ ezi ndụ ọnụ, na-agbatị okirikiri nke ụlọ na ụlọ obibi ọhụrụ na-emekọ ihe ọnụ, yana ịmatakwu mmekọrịta mmekọrịta mmụọ n'etiti na ndị na-azụ ahịa.
Flowlọ Ifuru ọhịa
Oge ntoju na zuru postcho
Pulsating n'etiti sere n'elu ọkụ na onyinyo
Echiche nka nka banyere braking
Mee ka oge a mara mma
Na-eje ije n'ime oghere, okooko osisi na-eto n'ụzọ zuru oke ma sie ike, ikuku juputara na isi ísì ụtọ nke okooko osisi, na-asọpụta na amara dị jụụ ma mara mma. N’ịgbasa ntakịrị ọgba aghara, ndị mmadụ na-achọ ịmalite njem iji chọpụta ọdịnihu nke ndụ.
Ikuku na-ese n'elu mmiri, na-anụ ihe na-esi ísì ụtọ nke ìhè ma dị mma, ihe na-enye obi ụtọ na oghere, na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti ndị agbata obi na-akpachi anya, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị nso n'etiti ndị mmadụ.
N'akụkụ ebe a na-aga n'okporo ụzọ, anyị akwadebela ebe dị mma maka ụmụ anụmanụ igwu egwu na obi ha. Ihe a na-ahụ anya nke iko na-eme ka ókè nke oghere dị, na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na anụmanụ na-akpachi anya karị, na mmasị nke okike na-emetụ ndị mmadụ n'obi, bụ ebe ịma mma dị ọcha nke mmegharị jupụtara.
Aroma bụ koodu nzuzo nke gburugburu,
na ọnụ ụzọ nke mmetụta uche
Okooko osisi, kọfị na akwụkwọ
Echiche nke isi na-arụ ọrụ dị elu
Ma mee gị ezigbo ezumike
N'ime ndụ obodo ahụ, ndị mmadụ na-atụ anya ịlaghachi n'ezi ọdịdị ha, na-achọ ebe ha ga-alaghachi, na-echere mkparịta ụka na-ekpo ọkụ na nke enyi. N'ebe a na-a coffeeụ kọfị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ, anyị na-ebelata ọsọ anyị, chefuo ọtụtụ ihe ndọpụ n'obodo ahụ, ma na-etinye onwe anyị n'ehihie nke kọfị kọfị, na-akparịta ụka na ndị ọzọ ma na-achọta mmụọ.
Naanị ihe ọkụkụ kwesịrị ekwesị na-achọ mpụta nke kọfị kọfị. Na-eteta mgbe niile banyere okike maka mụ na gị. Ige egwu na nnukwu ekweisi bụ usoro ụbọchị nke oke bekee mara mma, Bean Bean. Ọdịdị ya na-eme ka oghere dịkwuo ụtọ ma na-agbanwe agbanwe. Ọ na-egosi n'ebe dị iche iche na mbara igwe mejupụtara wee soro gị nwayọ ma nwee obi ụtọ.
Chefuo ihe niile, ihe niile ga-esokwa gị. Ihe omuma nke obodo ndi mejuputara na ndu aesthetics na enyere ndi mmadu aka ma obu ha nwere ihe omuma na nkasi obi.
N'etiti n'ime na n'èzí
Ọ na-eme mkpọtụ n’èzí, ọ dịkwa jụụ n’ime
A na-amata ókèala
Obi dị anyị ụtọ n’oge a
The transperent iko ákwà mgbochi na-emebi ókè nke ohere, na-ejikọ ime ụlọ na n'èzí Mpaghara. Ìhè anyanwụ na-awụ, na-ahapụ onyinyo ịkwaga. Na-ejide oge mara mma na jụụ na ịdị jụụ, ịdị mfe nke okike bụ ọgwụgwọ na-enye obi ụtọ maka mkpụrụ obi.
Anyị na-achọ ncheta sitere n'ugwu na ala, mma nke ịdị mfe ahụ pụrụ iche na ịdị ọcha. Gburugburu ahịhịa ndụ, anyị na-emikpu onwe anyị na mbara ala a dị jụụ ma na-agbanwe agbanwe, ebe ịma mma okike nke okike jupụta ndụ anyị na olileanya.
Nzọụkwụ na akwụkwọ mpempe akwụkwọ, yana ahịrị iji gaa n'ihu na-eto eto nke usoro a na-eme, ebe izu ike na ọkụ na onyinyo na-agbanwe nke ọma, nke yiri ka ọ na-adịghị adị na-adọta echiche ndị mmadụ na-enweghị ngwụcha, na agba osisi iji nweta ike nke ịdị jụụ.
Ka ị na-arịgo steepụ, ahịhịa juru na-ada n'azụ gị, ebe sandbox na ebe a na-eme mkparịta ụka, efere nwayọ na-adị nwayọ na-apụta n'ihu gị.
Ndị ahịa nwere mmasị na ọrụ ha nwere ike ịnweta ozi ha chọrọ ebe a; ụmụaka ndị ike gwụrụ na mkparịta ụka okenye nwere ike zoo na mpaghara ụmụaka pụrụ iche; na ndị enyi na-enweghị isi nwere ike ịga n'ihu na-enyocha oghere a na-ekerịta. Ọ bụ ihe dịgasị iche iche na nsonye, ​​nke ahụ bụ ihe United Living Experience Center na-enye ndị ọbịa.
Ihe kacha eri ìhè
Friendsfọdụ ndị enyi na-ezukọ ma na-atakwunyere ibe ha ihe
Nchikota nke mmanya
Na uto uto na egbugbere ọnụ na ezé
Kporie ndụ n'oge a
Oge ị bara n’ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ọ ga-adị gị ka ị nọ na ihe omimi nke Ọkachamara nke Oz. Ọnọdụ nrọ na nke dị omimi, nke echiche gị na-emetụta, na-ejigide ọmarịcha ịma mma ya ma mee ka ohere jupụtara na anwansi dị egwu, na-eme ka obi gị nwee mmetụta.
Nchikota nke dusky ọkụ, square na gburugburu jagged n'ígwé, ike ike mgbidi ihe, ìhè, ụdị na ihe na-emepụta a rustic na ememe oriri ebe, oge ochie, mfe ma mara, nke na-eweta ihe ndị kasị ohere ohere, edemede ncheta gafee oge na ohere, na n’ịghọta mmekorita nke mmụọ n’etiti ika na ndị ahịa.
Àgwà na ihe nzuzo, mmetụta uche siri ike na nke dị ike na-ejikọta, gbanwere ma jikọta ya na oghere ahụ, na-enwe ụdị ọkpụrụkpụ na-agbadata site na oge, nke ndị ọbịa na-emikpu onwe ha, mechie akụkọ ahụ ma nwee mmetụta nke ịchọ mma nke ịhụnanya ịhụnanya.
Umu nwanyi obi uto na onu
Ngbanwe na ikwubiga okwu ókè
Ọ bụ ihe ntụrụndụ niile nke nwata
Daysbọchị nwata, dị mfe ma dịkwa ọcha
Mpaghara ụmụaka na-eji echiche nke "iti mkpu na ị listeninga ntị" na-akọ akụkọ nke oghere. Ọcha oroma a na-emepụta ihu ọchị na ihu igwe dị mma, ebe ụdị a na-emegharị ahụ na-egosi esemokwu nke ihe, na -emepụta ụwa ọchị maka ụmụaka. Nhazi ahụ na-eji ihe mgbochi agba na ụdị iji mepụta ihe ngosi dị egwu ma nye ohere ohere nke ike.
Site n'oge gara aga ruo n'ọdịnihu, oghere ekwesịghị ịbụ agbụ ma ọ bụ agbụ, kama ọ bụ onye na-ebu ya na ịga n'ihu nke ndụ ka mma. Dị ka uto nke okike, anyị na-anabata ndụ ọhụụ site na agụụ na olile anya. Nke a bụ nyocha nke obodo ọdịnihu, na-ewere ụlọ dị ka okirikiri dịpụrụ adịpụ, na-ekwe ka ihe okike soro ndụ, na -emepụta ọnọdụ ndụ dị ọkụ, na inweta mmụọ mmetụta mmụọ na ahụmịhe jupụtara na ya.
N'ebe a, oke dị n'etiti okike na obodo adịchaghị mma, nghọta nke ahụmịhe ndụ ga-akọwagharị, na ezi uche na mmetụta uche ga-agakọ, mmetụta miri emi na nke zuru oke nke ga-eme ka ndị mmadụ chefuo ịlaghachi. Obodo dị ndụ nke nwere ịhụnanya na mmekọrịta, na-etinye aka na uri uri, na-enye egwuregwu zuru oke n'echiche mara mma nke ọdịnihu n'etiti ọchị, ịhụnanya na ịdị ọcha.
Aha Ụlọ Ọrụ: Vanke - Golden Mile International
Adreesị :lọ Ọrụ: Guangdong Jiangmen
Mpaghara oru: 1193m²
Onye Mmepụta: Vanke
Companylọ ọrụ :lọ Ọrụ: BJRJ .BỌR.
Design akporo: Ime ụlọ na Nro dị nro
E hiwere ENJOYDESIGN na 2010 ma dị na Guangzhou. Dị ka ọkachamara ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ, anyị na-enye atụmatụ ngwaahịa na ahaziri ahaziri maka ụlọ obibi (ọfịs ahịa, ụlọ ngosi, ụlọ obibi, ebe ọha na eze) na ọrụ ọfịs maka ndị ahịa kachasị elu na ụlọ ọrụ dị iche iche, yana ịwụcha ihe eji eme ihe ụkpụrụ R&D maka iduga. ala na ụlọ ahịa, anyị na-enye ọkachamara imewe na ize ọrụ maka agụmakwụkwọ, ochie mmezi na revitalization oru.
Anyị nwere ndị ọrụ aka ọkachamara nwere karịa mmadụ 260. Dị ka onye na-eme ihe mara mma, anyị na-akwado na aesthetics na-eweghachi ndụ na nke mbụ, anyị na-ekwusi ike na ịmalite site na mmetụta na ahụmịhe nke onye ahịa, anyị na-enyekwa ọtụtụ ndị ahịa ihe ịtụnanya dị omimi nke oge a na nke ọhụụ na asụsụ pụrụ iche anyị. Anyị kwenyere na atụmatụ niile na-amalite site na mgbanwe, ma ọ bụ ijere ọha mmadụ ozi ma ọ bụ ịgbanwe ndụ ndị mmadụ, ọbụlagodi na mgbanwe ahụ dị aghụghọ.
Anyị bụ maverick, ma ọ bụghị iche; anyị dị jụụ, mana enyi na enyi.
Nke gara aga :: Senior Gray, Ube oyibo Green Ma Champagne Pink, A Ihunanya Space Ebe Ochie Na Modern Coexist Osote: Kasị Ọkachamara na Comprehensive Analysis On Light okomoko!